राजपाको अन्तरिम विधान निरंकुश जस्तो देखिन्छ : सुनिलकुमार पटेल
० ६ वटा दल मिलेर एउटा बनेको राजपाको नीति र सिद्धान्त कस्तो छ ?
— विगतमा ६ वटा दल भए पनि एउटै नीति र सिद्धान्त थियो । ६ वटा दल एकीकरण भएपछि अंकगणितीय रूपमा शक्ति प्रदान भएको छ । यो शक्तिलाई उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
० राजपाले हालै बनाएको पार्टीको विधान कस्तो लाग्यो ?
— राजपाको विधानको विषयमा अहिले नै मूल्यांकन गर्नु हतार होला जस्तो छ । राजपालाई शंकाको सुविधा पनि दिनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक भएको विधानलाई उहाँहरूले आफैं अन्तरिम विधान भन्नुभएको छ । भनेपछि अर्को मुख्य विधान आउन बाँकी छ । यो विधान अर्को विधानको रोडम्यास हो । त्यसैले यो विधान कत्ति प्रजातान्त्रिक भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
० यो विधानमा के–के सुधार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ ?
— मेरो दृष्टिकोणमा यो विधानमा धेरै सुधार आवश्यक छ । अन्तरिम विधान कुन–कुन विधि र प्रक्रियाबाट पारित हुने त्यो कुरा प्रष्ट छैन ।
० विधानमा पार्टीका अध्यक्षमण्डलले आफ्नो मातहतमा धेरै अधिकार राखेको कुराहरू पनि छन् । जस्तै, अध्यक्षमण्डलको अधिकारमा पार्टी विस्तार, विलय, एकीकरण, नाम परिवर्तन, चुनाव चिह्न परिवर्तन, झण्डा परिवर्तनलगायत अधिकार दिइएको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— यस विषयमा चर्चा हुुनु स्वभाविक हो । तर, त्यो अन्तिम विधान भइदिएको भए यो निरंकुश नै हुन्थ्यो । अहिले त अन्तरिम विधान आएको हो । ६ वटा दलहरू एक ठाउँमा आएका छन् । यसमा थुप्रै विरोधाभाष होलान् । थुप्रै समस्याहरू होलान् । अहिले यो विधान निरंकुश देखिए पनि अन्तिम विधान आएपछि मात्र यस विषयमा केही भन्नु उचित हुन्छ । अब जुनसुकै पार्टी एकीकरण हुँदा अथवा विलय हुँदा त्यसको संरचना केही भद्रगोल नै हुन्छ । माओवादीपछि सबभन्दा बढी भद्रगोल संरचना भएको पार्टी अहिले राजपा हो । त्यसकारण अध्यक्ष मण्डलले असीमित अधिकार लिएको देखिन्छ । अलि निरंकुश जस्तो देखिन्छ । तर, यो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो ।
० राजपाले तेश्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाउनुपर्छ कि बहिष्कार गर्नुपर्छ ?
— उपेन्द्र यादवजी चुनावमा गएर धोका दिइसक्नुभएको छ । यता, राजपाको अहिलेको अवस्था हेर्दा भद्रगोल छ । चुनावमा जाने कि नजाने विषयमा राजपा अन्यौलमा छ । राजपा आन्दोलनकारी पार्टी हो कि सत्ताधारी पार्टी हो, त्यसमा पनि अन्यौल छ । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पक्षमा भोट पनि दिनुभएको थियो । फेरि आन्दोलनको कुरा पनि गर्नुहुन्छ । संविधान संशोधनको कुरा पनि गर्नुहुन्छ । चुनावमा जाने कि नजाने भनेर पनि कुरो गर्नुहुन्छ । पछिल्लो समयमा मधेशकेन्द्रित दलमध्ये केहीले चुनावमा सहभागिता जनाएका छन् । तर, संविधान संशोधन सबै मधेशवादी दलले चाहेका छन् । अर्कोतर्फ ठूला दलको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि ठूला दल संशोधन चाहेका छ्रैनन् । भन्नेबेलामा कांग्रेस र माओवादीले आफूहरू संशोधन गराउन चाहेको भनेर भन्ने गरेका छन् । यी कुरा झुक्याउनका लागि मात्र भनिएको अहिलेसम्म देखिएको छ । संविधानमा धेरै कमिकमजोरी रहेको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् । संविधानमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ । हुन त विगतमा उपेन्द्रजीले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए । तर, उहाँ चुनावमा सहभागिता जनाउनुभयो । अब जहाँसम्म तेश्रो चरणको चुनावको कुरा छ । सबै मधेशीले उत्सुकताका साथ राजपालाई हेरिरहेका छन् । राजपा चुनावमा जान्छ कि जाँदैन । यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
० तपाईंको विचारमा राजपा चुनावमा जानुपर्छ कि पर्दैन् ?
— नेपालको राजनीति धेरै नाजुक मोडमा आइसकेको छ । पहिला त आफ्नो धार छुट्याउनुपर्छ । आन्दोलनकारी हो कि सत्ताधारी हो कि गोलमटोलबादी हो भन्ने धार छुट्याउनुपर्छ । निश्चय पनि आन्दोलनमा जानु कसैका लागि पनि सुखद हुँदैन । तर, विद्रोह नगरेसम्म सुखद बिहानी पनि कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले उहाँहरूले आफूहरू विद्रोही कि सत्ताधारी छुट्याउनुपर्छ । यसका साथै यो संविधान कत्ति हदसम्म स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यो पनि छुट्याउनुपर्छ । मधेशलाई फेरि पनि गुलामीको बाटोमा लैजाने हो भने निर्वाचनमा जाँदा हुन्छ ।
० राजपा चुनावमा गयो भने के हुन्छ ?
— चुनावमा गयो भने अलिअलि उनीहरूले सत्ताको स्वाद पाउनेछन् । शासक वर्गले फेरि मधेशलाई फुटाउनेछन् । नुन च्यूरा र मासु च्यूरामा पनि मतदाताको खरिदविक्री हुने गरेको पनि सबैलाई थाहा छ । कसैलाई जागिर लगाइदिनेलगायतका विकृति प्रवेश गर्छ र यसले हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनेछ । राजपाले चुनावमा सहभागी हुनुहुँदैन, साथै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुपर्छ । राजपा तुरन्त सडकमा आउनुपर्छ । संविधान संशोधन ठूलो नौटंकी हो । जसले जबरजस्ती संविधान जारी गरे ती दलहरूले सहजै रूपमा संविधान संशोधन गर्नेबाला छैनन् । त्यसैले चुनावमा जानु भनेको ठूलो धोकामा फस्नु हो । मेरो विचारमा राजपाले अब स्थानीयस्तरमा समानान्तर कमिटी गठन गर्नुपर्छ ।
० संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो भने यसले समस्याको समाधान हुन्छ ?
— यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन । यो नौटंकी हो । अलिकति पछि संविधान संशोधनका लागि अहिलेको प्रस्तावले केही लचिलो बनाउँछ । अरू खासै उपलब्धि छैन ।
मधेशवाणी साप्ताहिकका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ।